बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उपचार अब ९ महिनामा- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उपचार अब ९ महिनामा
पुस १४, २०७४ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले बहुऔषधि प्रतिरोधी (मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्ट) क्षयरोगको उपचारका लागि छोटो अवधिको उपचार विधि सुरु गर्ने भएको छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर केन्द्रले सोमबारदेखि नयाँ विधि सुरु गर्न लागेको हो ।
केन्द्रका निर्देशक डा. केदारनरसिंह केसीले यो उपचार विधि काठमाडौं, बुटवल, विराटनगर र नेपालगन्जमा सुरु गरिने बताए । ‘बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उपचारमा छोटो उपचार विधि कोसेढुंगा साबित हुनेछ,’ केसीले भने ।
यो विधि सुरु गर्ने मुलुकमा नेपाल ३८ औं भएको छ । ९ महिने उपचार विधिको सफलता दर करिब ८५ प्रतिशत छ । क्षयरोगको बिग्रिएको र जटिल स्वरूप अर्थात् सामान्य औषधिले नछुने अवस्थालाई नै बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग भनिन्छ । बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगीलाई हाल २० देखि २४ महिनासम्म औषधि खुवाइने गरिएको थियो । यसको सट्टा ९ महिना मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्ने छोटो विधि सुरु गर्न लागिएको हो । यसअघि सञ्चालित हुँदै आएको दुईवर्षे उपचार विधिमा ८ देखि १२ महिनासम्म सुईसमेत लिनुपर्ने भए पनि ९ महिने उपचार विधिमा ४ देखि ६ महिनासम्म मात्रसुई लिए पुग्छ ।
‘छोटो अवधिअन्तर्गत एकजनामा उपयोग गरिने औषधिको मूल्य करिब दुई लाख रुपैयाँ पर्छ, तर यसको उपचारअन्तर्गत निदान, फलोअप,उपचार, औषधि सबै नि:शुल्क छ,’केन्द्रका डा. प्रमोद भट्टराईले भने ।
उनका अनुसार यो विधिमा औषधिको कारणले हुने विषाक्तता, नकारात्मक असरसमेत कम देखिएको छ । छोटो उपचार विधिअन्तर्गत ९ महिनासम्म औषधि दिँदासमेत खकार पोजेटिभ देखिए पुन: दुई महिना औषधि थप्ने गरिएको समेत जेनटपकी डा. भावना श्रेष्ठ बताउँछिन् । छोटो अवधिको उपचार सेवा फोक्सोबाहेकका अंगको क्षयरोग भएका एवं गर्भवती महिलालाई दिइने छैन ।
मुलुकमा करिब १२ वर्षअघि बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उपचार विधि सुरु गरिएको हो । हाल १८ उपचार केन्द्र र ८६ उपकेन्द्रबाट वार्षिक ४ सय ५० जनालाई बहुऔषधि प्रतिरोधी उपचार उपलब्ध गराइएको छ । हाल मुलुकमा ३२ हजार ५७ जना नयाँ सामान्य क्षयरोगीहरू उपचार गराइरहेका छन् । सामान्य क्षयरोगको औषधिसमेत नि:शुल्क छ ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७४ ११:३८
आर्सनलको संघर्षपूर्ण जित
पुस १४, २०७४ एएफपी
लन्डन — आर्सनलले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा बिहीबार राति क्रिस्टल प्यालेसमाथि ३–२ को संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ । पूरा खेल अवधिमा अगाडि रहेपनि प्यालेसको बलियो चुनौती अगाडि आर्सनल दबाबमा रहन बाध्य रह्यो ।
आर्सनलका लागि एलेक्स सान्चेजले दुई गोल गरे भने अर्को गोल मुस्तफाको नाममा रह्यो । प्यालेसका तर्फबाट एन्ड्रोस टाउनसेन्ड र जेम्स टोमकिन्सले गोल गरे ।
जितपछि आर्सनल ३७ अंकमा छैटौं स्थानमा रह्यो । प्यालेसको भने १८ अंक छ र छैटौं स्थानमा छ ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७४ १०:२३